Qaybaha Samaynta - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Ka dib sanado badan oo shaqo adag ah, PCBfuture waxay soo saartay iskaashi xoogan oo lala yeesho qeybiyeyaasha adduunka ugu caansan, taas oo noo suurtagelisay inaan ka helno qaybaha tayada sare leh ee laga helo alaab-qeybiyeyaasha iyo soo-saareyaasha idman. Hadda, PCBfuture waxay leeyihiin 18 injineerro wax soo iibsi oo xirfadlayaal ah waxaanan soo saarnay habab sifiican loo abaabulay uguna saxsan ee lagu heli karo qaybaha elektaroonigga ah. Dhammaan shaqooyinkayagu waxay naga caawinayaan inaan gaabinno silsiladda sahayda oo aan ku soo iibsanno qaybo asal ah qiimaha ugu dhaqaalaha badan. Ka sokow, Waqtiga hogaaminta BOM-ka ee Golahayaga PCB wuxuu noqon karaa sida ugu dhakhsaha badan 24 saacadood.
Tayada Sare ee Elektaroonigga ah
PCBfuture marwalba way ogtahay in tayada ay tahay waxa ugu muhiimsan ee macaamiisha, qeybaha ayaa ah sababta ugu weyn ee guddiga elektarooniga ah u shaqeyn karo waqti dheer iyo inkale. Tan iyo markaas, waxaan dhiseynaa wadashaqeyn adag kuwa idman iyo kuwa caanka ah ee alaab-qeybiyeyaasha, oo ay ka mid yihiin Arrow Electronics, Mouser, Avnet, Digi-key, Farnell, Future Electronics, iwm. bakhaarkayaga.
Noocyada noocyada yaryar iyo kuwa udub dhexaadka ah
Dhamaanteen waan ognahay in qalabka elektiroonigga ahi yahay qaybta ugu muhiimsan ee adeegga isku xidhka PCB iyo sidoo kale waxay u baahan tahay daadin weyn oo tamar, kheyraad iyo waqti loogu talagalay. Marka loo barbardhigo Volume pcb Assembly, shirkii pc-ga nooca loo yaqaan 'Prototype pcb' wuxuu noqon doonaa mid aan dhaqaale u ahayn injineerada iyo naqshadeeyayaasha. PCBfuture waxay abuurtay qaab wax soo iibsi oo hufan oo naga dhigaya inaan ka soo bixinno oo soo xigano qaybaha loo baahan yahay si dhakhso leh. Ku tiirsanaanta iskaashiga dhow ee kooxda, waxaan si dhakhso leh u soo qaadan karnaa BOM, iyadoon loo eegin inay tahay nooc ama amarro mug leh. Sidoo kale waxay naga caawin kartaa inaan helno waxyaabaha adag in la helo sidoo kale.
Sannad kasta, PCBfuture iibsashada tiro aad u tiro badan oo ka socota qeybiyeyaasha si fiican u yaqaan iyo soo saarayaasha qaybaha. Qaddar badan oo iibsi ah ayaa noo oggolaanaya inaan ka helno qiimo yar iyaga. Tani waxay naga caawineysaa inaan yareyno kharashkeena taas oo noo sii suuro galisay inaan macaashkeenna u gudbinno. Amaradayada isku-xidhka ballaadhan ee ballaadhan ee PCB-ga ayaa yaraynaya baahida loo qabo kaydinta alaabada dheeraadka ah ee loogu talagalay qaybaha elektaroonigga ah ee annaga.
Hadafkeena koowaad waa in aan ka dhigno wax soo saarka PCB-ga, Qalabka Sourcing iyo kulanka elektarooniga ah shaqadeena, oo aan u oggolaanno macaamiisheenna inay xoogga saaraan injineernimada elektarooniga ah iyo qaabeynta.
Si aad u hesho qiyaasta qarashka Golaha PCB ee mashruuc mustaqbalka ah, fadlan u gudbi codsigaaga adeegga @ pcbfuture.com.